Dagaal dhexmaray al-Shabaab iyo Xisbul Islaam - BBC Somali
Dagaal dhexmaray al-Shabaab iyo Xisbul Islaam
11 Disembar 2010
Wararka ka imanaya degmada Buurhakaba ee gobolka Bay, ayaa sheegaya in maanta ay halkaasi ka taagan tahay xiisad dagaal, oo u dhaxeeysa Xarakada Al-shabab iyo Xisbul Islaam.
Xiisadda ayaa ooogantay markii waaberigii saaka markii ay degmada Buurhakaba dib u soo galeen kooxo hubeysan oo ka tirsan Xisbul Islaam oo dhawaan degmadaasi ay Alshabab kala wareegeen.
Barqadii hore ee saaka, ayaa waxaa halkaasi ka dhacay is rasaaseyn u dhaxeysay labada dhinac waxana colaadda ka taagan Buurhakaba maanta ay saameyn ku yeelatay shacabka magaalada, iyadoo la xiray goobaha ganacsiga ee degmada.
Waxa jira warar is qilaafsan oo ku saabsan qasaaraha dagaalka. Ilo madaxbanaan, oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa BBCda u sheegay in ugu yaraan sadax qof oo dhinacyadii dagalamayay ay ku dhinteen dagaalka 5 kalana ay ku dhaawacmeen.
Waxaa kaloo ay sheegeen in magaalada hadda ay labo ugu kala qeybsan tahay Shabaab iyo Xisbul Islaam, is rasaasey goos goos ah oo mar mar xoogeysaneysana weli laga maqlayo magaalada gudaheeda. Dhamaan waxa xiran dugsiyada iyo malcaamadaha magaalada kadib markii ardeydii wax ka baran jirtay ay u soo xaadiri waayeen xiisadda colaadeed ee taagan awageed. Degmada Buurhakaba, ayaa waxa horey u maamuli jiray Xisbul Islaam hase yeeshee todobaadkii dhamaaday bartamihiisii ayaa waxa la wareegey Al-shabab oo xoog ku soo galay magaalada.
Inta badan degmooyinka gobolka Bay waxa gacanta ku haya Al-shabab.